Moa Gmail Fa Business SMTP Rehefa Jerena Actionetics - Lantonoara Of The Day
Raha mitady ny fomba hiatrehana ny Gmail raharaham-barotra kaonty mampiasa SMTP compatibles amin'ny Actionetics, tsy misy marina na mivantana ny fomba hanaovana izany hitranga mampiasa ny rindrankajy ny Asa vaventy.
The SMTP tolotra izay tohanan'ny Clickfunnels amin'izao fotoana izao dia Alefaso grip, Mandrill, Ses Amazon sy Send13.
Raha handalina safidy hafa mampiasa milina fikarohana, ianao hitanao fa ny ankamaroan'ny tranonkala mifandray amin'ny tranga io fahazoan-dalana anao mandrakariva mampiasa rindrambaiko fanampiny.
Moa Gmail ho an'ny fandraharahana SMTP mifanaraka amin'ny actionetics? Ny valiny dia eny fohy, fa ianareo kosa mila ny Etison tariny mba hanaovana azy hiasa tsara.